Ogaden News Agency (ONA) – 7ba urur oo JWXO ay ka mid tahay oo isugu yimid shir wada-tashi
7ba urur oo JWXO ay ka mid tahay oo isugu yimid shir wada-tashi
Posted by ONA Admin	/ March 4, 2013
Horaantii todobaadkan waxaa shir wada tashi ah isugu yimid 6 urur oo ka mida ururada la dagaalama Xukuumada dhiig miiratada ah ee Gumaysiga Itoobiya iyo ururka ONLF oo ahaa ururkii 7-aad ee ka qaybgalay kulankaasi, waxaana shirkaasi looga arinsanayay sidii meel loogasoo wada jeedsanlahaa la dagaalanka Xukuumada Wayaanaha.
Ururada ku kulmay shirkan wada-tashiga ah ayaa waxay kala ahaayeen T.P.D.M, E.P.P.F, Ginbot 7, G.P.L.M, A.D.F.M, EJ.E.F iyo Ururka ONLF oo isaga ahaa ururkii ugu waynaa ururadii shirkaas ka soo qayb-galay.
Shirkaas oo mudo todobaad ah socday ayaa waxaa la isku waydaarsaday xogta dhabta ah ee Gumaysiga Itoobiya iyo halka ay haatan marayso xaalada kala guurka ah ee Itoobiya. Intii uu kulankani socday Waxaa sidoo kale la isla jeexjeexay habka
ugu sahlan ee loo abuurilahaa wada shaqayn iyo iskaashi dhaxmara dhamaan ururada la dagaalama dulmiga Gumaysiga Itoobiya.
Wufuudii kala duwanayd ee madashaasi isugu timid waxay si wada jir ah u iftiimiyeen dhibaatada iyo tacaddiga lagu hayo guud ahaan shucuubta ay itoobiya gumaysato iyo sidii looga saarilahaa oo ah in la sameeyo iskaashi awood badan oo soo dadajiya in meesha laga saaro xukuumada wayaanaha ee shacabka ku dul nool.
Waftigii JWXO uga qaybgalay kulankaasi oo uu hogaaminayay N/hure Maxmed Sh/ axmed waayeel ( Maxamed dawiil ) ayaa halkaasi kasoo jeediyay khudbad dhaxalgal ah oo ay xubnihii meesha joogay aad ula dheceen. Wuxuuna ku sharaxay mabaadii’da JWXO oo ah in ay shacabka Soomaalida Ogaadeenya aayahooda ka tashadaan.
N/hure Maxamed dawiil wuxuu halkaasi ka gudbiyay bayaan xanbaarsanaa fariintii JWXO oo uu kaga warbixiyay heerka uu marayo halganka gobannimodoonka ah ee ay JWXO hormuudka ka tahay iyo waliba xaaladda shacabka Soomaalida Ogaadeenya ee gudaha iyo dibaddaba.
Wuxuu halkaasi ka caddeeyay N/hure Dawiil in JWXO diyaar u tahay iskaashi dhaxmara dhamaan ururada la dagaalamaya xukuumda kala qaybsanaantu hadhaysay ee wayaanaha.
Sidoo kale waxaa meeshaasi hees waddani ah ka qaaday Maxamed Axmed Maxamed (Shiine) heestaas oo markii loo micneeyay dadkii meesha fadhiyay dhamaantood dhiigu wada dhaqaaqay islamarkaana dalbaday inloogu laba celiyo heestii.
Iskusoo wada duuboo waxaa kulankaasi kasoo baxay Isfahan balaadhan iyo
in si joogto ah looga wada arrinsado xaalka gumayisga iyo sidii loo gabgabayn lahaa.
Wuxuu shirkan oo ahaa midkii ugu horeeyay noocisa ku soo idlaadaay guul iyo sidii loogu talo galay.